Imandarmedia.com.np: तपाइको मुख गन्हाउँछ ? यो हो गम्भीर रोगको संकेत
Lifestyle » तपाइको मुख गन्हाउँछ ? यो हो गम्भीर रोगको संकेत
तपाइको मुख गन्हाउँछ ? यो हो गम्भीर रोगको संकेत
मुख गन्हाउनु । सामान्यत मुख सफा नगरेको, दाँतमा ब्रस नगरेको अवस्थामा यस्तो समस्या हुनसक्छ । तर, कतिपयको सास/मुख गन्हाउँछ, अन्य दिनमा पनि । यसको कारण धेरै हुनसक्छ । गलत खानपान, पेटको समस्या, दाँत वा मुखको सरसफाई नहुनु आदिले मुख गन्हाउँछ ।
हामी ठान्छौं, यो सामान्य समस्या हो । यद्यपी कतिपय अवस्थामा यो गंभिर रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । त्यसैले समयमै मुख तथा सास गन्हाउने समस्याबारे जान्न आवश्यक छ ।
चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल अस्पतालका वरिष्ठ मुख तथा अनुहार विशेषज्ञ डा. सुभाष घिमिरे मुख गन्हाउने समस्याबारे यसरी बताउँछन् ।
मुख गन्हाउने समस्या दुई कारणले उत्पन्न हुने गर्छ ।
मुखमा घाउ खटिरा आएमा, गाँठागुँठी आएमा, गिजा पाकेमा, दाँतमा किरा लागेमा, खाल्डो परेमा तथा दाँत राम्ररी सफा नभएमा पनि मुख तथा सास गन्हाउने गर्छ । त्यसैगरी, दाँतको कापमा तथा मुखमा फोहर जम्मा भएर बसेमा पनि त्यहा अड्किएका फोहरका कारण मुख गन्हाउने गर्छ ।
त्यस्तै, मुखमा जटिल समस्या उत्पन्न भएमा, मुखको क्यान्सर, मधुमेह, स्वास प्रस्वास नलीमा, मृगौलामा समस्या उत्पन्न भएमा पनि मुख तथा सास गन्हाउने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ ।
२. फोक्सोको संक्रमण
३. कलेजोको संक्रमण
४. मृगौलाको समस्या
५. गिजाको समस्या
जिगाको समस्याका कारण पेरिओडोन्टिक नामक रोग लाग्ने गर्छ । जुन मुख गन्हाउने समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
यस्ता समस्याबाट बच्नको लागि यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
रुयदी कसैलाई विहान बेलुकी राम्ररी ब्रस गर्दा पनि मुख गन्हाउने समस्या छ भने
– मुखको भित्र, गिजा वरिपरि तथा गालातिर ठूलो घाउ छ भने
–मुखको राम्ररी सरसफाई गर्दा पनि मुख गन्हाउने समस्या भइरहन्छ भने
–मुखमा रातो, सेतो वा कालो घाउ छ भने
– दातलाई पाच भागमा बाडेर तल, माथि, दाया बाया तथा दातको टुप्पोमा राम्ररी सफा गरेर पनि फेरी डेन्टल चिकित्सकद्धारा दातको सफाइ गर्दा पनि मुख गन्हाउने समस्या कम नभएमा
सबैभन्दा पहिले दात विशेषज्ञका जानु आवश्यक छ । यदी दातको सम्पूर्ण चेकजाचका बाबजुद यदी कसैको मुख अन्य कारणले गन्हाउछ भने दात विशेषज्ञको सुझाव अनुसार फिजिसियनसितको परामर्श आवश्यक छ ।
अन्यथा, मुख तथा शरीरका अन्य भागको जटिल समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्छ ।
जबकी दात तथा मुखको राम्ररी हेरचाह गरेको खण्डमा मुखको मात्र नभई शरीरमा अन्य
समस्या समेत नआउने डा. घिमिरे बताउँछन् ।
(चावहिलस्थित आम समाज डेन्टर अस्पतालमा मुख तथा अनुहार रोग विशेषज्ञ डा. सुवास घिमिरेसितको कुराकानीमा आधारित )